Ishibhile Umdwebo aluminium ingxubevange izingxenye extruded ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Inqubo yokudweba ebusweni ye-aluminium alloy
Umdwebo oqondile wocingo
Kushiwo ukwenziwa kwemigqa eqondile ebusweni bepuleti le-aluminium ngokushayisana kwemishini.
Inomsebenzi okabili wokususa imihuzuko ebusweni bepuleti le-aluminium nokuhlobisa ingaphezulu lepuleti le-aluminium. Kunezinhlobo ezimbili zokudweba ngocingo oluqondile: ucingo oluqhubekayo nolwezintambo eziphakathi. Amaphethini wentambo aqhubekayo angatholwa ngokugoqa amapayipi noma amabhulashi angensimbi engagqwali ngokuwahlikihla okuqondile okuqondile okuqondile ebusweni bepuleti le-aluminium (njengokugaya ngesandla ngaphansi kwensimbi ekhona noma ukusebenzisa i-planer ukubopha ibhulashi locingo ku-aluminium plate) . Ngokushintsha ububanzi bezintambo zebhulashi lensimbi engagqwali, ukwakheka kobukhulu obuhlukile kungatholakala. Amaphethini kasilika angenamkhawulo ngokuvamile acutshungulwa emishinini yokuxubha noma emishini yokuhlikihla. Umkhiqizo wokukhiqiza: Kusetshenziswa amasethi amabili amasondo ahlukile ohlangothini olufanayo. Isethi engenhla iyi-roller yokugaya esheshayo, futhi isethi engezansi iroli yerabha ejikeleza kancane. I-aluminium noma i-aluminium alloy plate idlula kumasethi amabili ama-rollers futhi ikhishwe ngaphandle. Imigqa eqondile ebucayi yezikhawu.
Umdwebo wephethini ongahleliwe
Iphethini kasilika engajwayelekile, engabonakali ebonakalayo etholwe ngokuhambisa nokuhlikihla ipuleti le-aluminium emuva naphambili ngaphansi kwebhulashi locingo lwesivinini esisheshayo. Lolu hlobo lokucubungula lunezidingo eziphakeme ebusweni be-aluminium noma amapuleti e-aluminium alloy.
Ngokuvamile, yenziwa ngomshini wokuxubha noma umshini wokuhlikihla. Sebenzisa ukunyakaza kwe-axial kweqembu elingenhla lama-roller wokugaya ukuxubha ebusweni be-aluminium noma i-aluminium alloy plate, Dweba iphethini yamagagasi.
Kubizwa nangokuthi ukujikeleza kwe-optical, okuwuhlobo lwephethini kasilika etholwe ngokusebenzisa isondo leyayilili elizwakala noma ligaywe ukufaka emshinini wokubhola, ukuxuba uwoyela wokupholisha nophalafini, nokujikeleza nokupholisha ingaphezulu le-aluminium noma i-aluminium alloy plate. Isetshenziselwa ukucubungula okokuhlobisa kwezimpawu ezizungezile nezingcingo ezincane zokuhlobisa.
Isebenzisa imoto encane enesiwombe esizwelayo kushaft bese iyilungisa etafuleni, cishe ngama-degree angama-60 ukusuka onqenqemeni lwethebula.
Ngaphezu kwalokho, kwenziwa ipallet enepuleti elungisiwe le-aluminium yetiye yokucindezela, futhi kwenziwa ifilimu ye-polyester eneziphetho eziqondile ku-pallet ukukhawulela umncintiswano wentambo. Kusetshenziswa ukujikeleza kokuzizwa nokuhamba okuqondile kwenqola, iphethini yentambo enobubanzi obufanayo ihlikihlwa ebusweni bepuleti le-aluminium.
Indima yomdwebo wocingo lwe-aluminium alloy
Umphumela otholakala ngomdwebo wocingo uzoba nomphumela omuhle kakhulu we-convex ne-concave. Ukudweba kwentambo kuyindlela yokulungisa. Ngoba kunemihuzuko ethile ebusweni bensimbi, sebenzisa umshini wokudweba ngocingo ukwenza imihuzuko engaguquguquki kuyo yonke indawo (ukunciphisa ukushuba kodonga) - ukumboza imihuzuko, kungcono ukuthi (kusetshenzwe Ngemuva kokuqina komsebenzi, kuzoshintsha ukusebenza). Kepha ukuklwebheka kunzima ukukugwema, ngakho-ke kuvame ukusetshenziswa. Ukudweba akugcini nje ngokususa amabhulashi ebusweni bepuleti le-aluminium, kepha futhi kunomphumela wokuhlobisa ukubukeka kwepuleti le-aluminium. (Kukhona futhi inqubo "yokushaya isitofu esishisayo" (ukudluliswa kwe-aluminium anodized), nayo engenza umphumela ofanayo ebusweni bezingxenye zepulasitiki.)
Izinto I-Aluminium, insimbi engagqwali nezinye izinto zensimbi zingashaywa futhi zipholishwe
Ukusetshenziswa Ngokuya ngezidingo zokwelashwa okuhlukile kokushisa
Langaphambilini Izingxenye zemishini ye-aluminium engu-6061-T6 emnyama eyenziwe ngomnyama
Olandelayo: Electroplated aluminium ingxubevange ngomshini izingxenye